Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguClaire
Indlwana ethe cwaka yalungiswa ngokutsha ehlathini. Kufuphi neBerkshire East, iShelburne Falls, iZoar Outdoor kunye nomlambo iDeerfield. Yiya kudlala okanye uhlale phantsi kwefeni kwaye ufunde incwadi yakho kwiveranda entle. Amagumbi okulala amabini aneebhedi ezimbini, ikhitshi eligcweleyo kunye nebhafu epheleleyo. Ikhabhinethi ihleli kwiihektare ezi-5 zemithi. Ilitye elinqabileyo le-skiing kunye nabathandi bokuloba ngokufanayo.
Le yinkampu efihlakeleyo ejikelezwe ngamaplanga anendawo yomlilo yangaphandle, igrill kunye nokufikelela kubo bonke ubuhle bendalo bendawo enkulu yangaphandle. Ukubalekela ngasese ngokwenene ehlathini.
Okanye kubantu abafuna ukonwaba sisehla nje kwisitrato unyaka wonke kumnandi eBerkshire East Resort (ukukhwela ibhayisekile entabeni, iintambo, ukutyibilika, umgca we-zip) kufutshane nemisitho yamanzi efana ne-rafting kunye nokuloba. Yonwabela umtsalane wedolophu ekufutshane needolophu zaseBuckland, eShelburne naseAshfield. Imizuzu nje ukusuka kwiBhulorho yeentyatyambo ezidumileyo.
4.88 · Izimvo eziyi-51
Ngaphandle kwendlela yelizwe engenazindlu kwisiza ukusuka kwiveranda yelanga yokuhlambela ngaphambili.
Umbuki zindwendwe ngu- Claire
Abanini abekho kwisiza kodwa bahlala nabo kule ngingqi xa kukho unxunguphalo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Charlemont